मतदाता परिचयपत्र छपाइको चटारो - Worldnews.com
मतदाता परिचयपत्र छपाइको चटारो
मंसिर १० र २१ गते हुने दुई चरणको
‘मतदाता नामावली पूरा नहुँदा परिचयपत्र छपाइमा ढिलाइ’
स्थानीय चुनावको निम्ति मतदाता नामावली संकलन अझै पूरा नभएकाले अहिलेसम्म पनि मतदाता परिचयपत्र छपाई शुरु हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हालसम्म ६६ जिल्लाबाट मात्रै...
स्थानीय तह चुनावको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक मतदाताहरुलाई सुरक्षा विशेषतासहितको मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने बताएको छ। नयाँ मतदाता परिचयपत्र छाप्न दिने...
काठमाडौँ, १२ असार । दोस्रो चरणमा यही असार १४ गते बुधबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १, ५ र ७ प्रदेशका ३५ जिल्लामा सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र...
डोटीमा आइतबार देखि मतदाता परिचयपत्र वितरण हुँदै
विमल विष्ट, डोटी । आगामी १४ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार देखि मतदाता परिचयपत्र वितरण हुने भएको छ । दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर ७ सहित तीन प्रदेशमा...
‘आजदेखि मतदाता परिचयपत्र बाँडिंदै’
आगामी बुधबार हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि तीन दिनसम्म सबै मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र बाँडिने बताएको छ। पहिलो चरणको...
मतदाता परिचयपत्र भदौ ३०, ३१ र असोज १ मा दिइने !
काठमाडाँैं, २७ भदौ । निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १ गतेसम्म मतदाता परिचय वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश नं २ का आठ...
काठमाडाँैं, २७ भदौ । निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १ गतेसम्म मतदाता परिचय वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा यही असोज २ गते सोमबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता छन् । आयोगले सदर मत प्रतिशत बढाउन तथा...
अहिले मतदाता परिचयपत्र लिने क्रम अघि बढिरहेको छ। सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ– पहिलाको र अहिले लिएको मतदाता परिचयपत्रमा के फरक छ र बेकारमा यो दुःख दिइएको होला? प्रश्न उनीहरूले उठाइरहेको भए पनि जवाफ दिने कोही नपाएर धरहराले आफ्नो दूरबीन अन्यत्रै मोड्नु ठीक ठान्यो। हुन पनि मतदाता परिचयपत्र लिने चटारोले सर्वसाधारणलाई...
बल्ल मतदाता परिचयपत्र
काठमाडौं, (नेस) दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र वितरण आइतबार शुरू गरिएको छ। प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय वितरण शुरू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा खटिएका मतदान अधिकृतको टोलीले ४ हजार ५ सय ८१ मतदान स्थलबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छन्। मतदाता परिचयपत्र असार १३ गतेसम्म वितरण गरिनेछ।...
मतदान केन्द्रबाट परिचयपत्र वितरणसँगै मतदान तरिका सिकाइँदै
काठमाडौँ, २८ वैशाख । स्थानीय तहको पहिलो चरणको आगामी आइतबारको निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र वितरणसँगै निर्वाचन चिह्नमा ठीक ढङ्गबाट मत सङ्केत गर्ने प्रशिक्षण आजदेखि सबै मतदान केन्द्रमा एकैसाथ सुरु भएको छ । मुलुकका ३, ४ र ६ नं प्रदेशका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा कायम रहेका छ हजार छ सय ४२ मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता÷स्वयंसेवकले आजदेखि तीन...